Webiga Shabeelle oo fatahaad ka sameeyay Gobolka Shabeellaha Hoose – Radio Muqdisho
Webiga Shabeelle oo fatahaad ka sameeyay Gobolka Shabeellaha Hoose
Webiga shabeelle ayaa fatahaad ka sameeyay tuulooyinka hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, taas oo saameyn ku yeelatay bulshada ku nool halkaasi.
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha hoose oo ay ka mid ahaayeen maamulka degmada Afgooye ayaa waxa ay geeyeen jawaano deegaannada uu webigu ku fatahay ee Sabiid iyo Caanoole si loo xiro meelaha uu jabsaday webiga Shabeelle,iyadoo sidoo kale webigu uu ku fatahay xaafado ka mid ah degmada Afgooye.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose, mudane, Ibraahim Aadan Cali “Najax” ayaa sheegay in ay ku guuleeysteen xiritaanka ilaa afar meel oo uu webigu ka jabsaday,waxa uuna ku baaqay in loo gurmado dadka ay saameysay fatahaadu.
Webiga Shabeelle ayaa waxa uu horay fatahaad xoogan uga geystay Gobolada Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan,iyadoo ay xusid mudantahay in hadda xaaladu ay tahay mid soo hagaageyso, wallow saameyntii uu geystay ay weli jirto meelaha qaar.
Wasiirka Shaqada iyo arrimaha Bulshada oo Geneva kusoo bandhigay halka uu marayo barnaamijka daryeelka Bulshada ee DFS